स्वादिलो तरकारी आलु विषाक्त त छैन ? - Baikalpikkhabar
स्वादिलो तरकारी आलु विषाक्त त छैन ?
भान्सामा हरेक छाक आलु पाक्छ । यस्तो लाग्छ, तरकारी भनेकै आलु हो । आलुको अनेक परिकार बन्छ । हरेक सागसब्जीमा आलु मिलाउन सकिन्छ । तर, हाम्रो स्वादिलो तरकारी आलु विषाक्त त छैन ?
पर्याप्त मात्रामा कार्वोहाइड्रेट र फाइबर पाइने आलुमा भिटामिन सी, भिटामीन बी६, पोटासियम र म्यानगनिजको पनि राम्रो स्रोत हो । भुटेर, तारेर, पकाएर, उसिनेर वा पोलेर जसरी पनि खान मिल्ने आलुको सेवन गर्दा धेरै क्लालोरी उर्जा प्राप्त गर्न सक्न्िछ ।
टुसा उमि्रएको आलु खान पनि स्वास्थ्यको लागि हानीकारक हुन्छ । टुसा उमि्रएको आलुमा सोलनिन र ग्लाइकोलोकाल्ड्स नामक एसिड परिवर्तन हुन्छ । जुन स्नायू प्रणालीको लागि धेरै हानीकारक हुन्छ । त्यसैले टुसा उउम्रिएको आलु खेतमा रोप्नको लागि त ठिक हुन्छ तर, खानको लागि ठिक हुदैँन ।
शुक्रबार, २१ मंसिर, २०७५, दिउँसोको १२:०२ बजे